Diovy haingana amin'ny fampirimana Nuclear | Avy amin'ny mac aho
Maro ireo mpampiasa mampiasa ny biraonao an'ny Mac mitahiry karazana rakitra, fisie izay kasainay hampiasaina atsy ho atsy ao anaty antontan-taratasy iray, hizara amin'ny mailaka avy eo na hitahiry fotsiny amin'ny kapila mangirana, fa ao amin'ny lahatahiry mifanaraka amin'izany.
Raha matetika isika miasa amin'ny rakitra izay mandany minitra vitsy amin'ny solosaina, ny tsara indrindra azontsika atao, mba aza famafana ny fisie misy ny birao, dia ny famoronana fampirimana manokana, folder iray azontsika hamafana rehefa nahavita ny asantsika isika, ireo fampidinana izay nataontsika ... Nuclear Folder dia fampiharana ho an'ireo tanjona ireo, fampiharana iray izay tompon'andraikitra amin'ny famafana ny atin'ny folder izay efa napetrakay teo aloha.
Misaotra ny Nuclear Folder, afaka mametraka fotoana voafaritra mialoha isika, aorian'izay dia hamafana ho azy ireo rakitra rehetra tafiditra ao anaty lahatahiry izay napetrantsika teo aloha, izay tsy mampitombo ny famokarana fotsiny, saingy manakana antsika tsy ho tonga saina amin'ny famafana ireo karazana rakitra ireo rehefa vita ny fiarahantsika miasa amin'izy ireo.
Fa ho fanampin'izany, mamela antsika hisafidy karazana rakitra tianao hamafana ihany koa, fiasa mety tsara raha misintona rakitra izay manana tanjona samihafa isika ary mamafa azy ireo tsy laharam-pahamehana ho antsika izany.
NuClear Folders dia manasongadina
Azontsika atao ny manamboatra safidy fanadiovana isan-karazany, miankina amin'ny karazana fisie na ny fe-potoana.
NuClear Folder, tsy mamela antsika hamafa ny votoatin'ny lahatahiry ho azy fotsiny, fa mamela antsika hamindra azy io amin'ny fampirimana manokana aorian'ny fotoana voatondro.
Tsotra tokoa ny fandidiana, satria tsy maintsy misafidy ny fampirimana resahina fotsiny isika, ny hetsika ary ny fotoana hanatanterahany ny lahasa voatondro.
Mba hampidirana ireo lahatahiry tiantsika hitantanana ny fampiharana dia mila misintona azy ireo fotsiny eo am-baravarankely fampiharana isika.
Azontsika atao ny manampy fampandrenesana fanamafisana rehefa hamafana ireo rakitra.
Ny Nuclear Folders dia fampiharana tsara raha mampiasa rakitra tsy maharitra matetika isika, satria tsy ny tsy fahampian'ny fandaminana ihany no hialana amin'izany, fa tsy hanangona fako amin'ny kapila mafy ataontsika. NuClear Folder dia azo alaina maimaimpoana amin'ny alàlan'ny rohy etsy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Diovy haingana amin'ny lahatahiry Nuclear Folder ny lahatahiry anao amin'ny fisie tsy ilaina